Mandresy sy miaro ny faritany ao amin'ity RTS antsoina hoe Battleplans | Androidsis
Amin'izao fotoana izao dia ny andron'ny RTS, ary raha efa nanana ny iray amin'ireo filokana tsara indrindra isika tamin'ny volana lasa amin'ny fanorotoroana ny fahavalonao!, izao dia mandeha hafa izahay. Somary malemy amin'ny Android ny karazana RTS. Heveriko fa ny fananana ny Starcraft II manjaka amin'ny rafi-masoandro hafa izay mbola an-taonany maro ny fahefana sary sy ny fanodinana dia tsy mamela antsika hanatona an'ity sokajy ity araka izay tadiavinay. Mety ho olana amin'ny fotoana iray indray andro any isika hankafy RTS tena izy avy amin'ny finday avo lenta izay ahafahantsika milalao lalao tsy misy lag miaraka amin'ireo mpilalao an-jatony erak'izao tontolo izao. Mendrika ny manakaiky zavatra iray i Clash Royale, saingy lavitra ny tena toetran'ny Starcraft karazana RTS, ny maha-izy ny jiro amin'ity karazana ity.
Battleplans dia RTS hafa miaraka aminy jereo tsara kokoa amin'ny sary hitondra antsika amin'ny loko fisaka, volavolan-toetra tena manan-karena ary karazana maro isan-karazany amin'ny fahaiza-manao ady mba hahafaly anay sy hanomezana fahafaham-po ny fanahin'ilay mpilalao ananantsika amin'ny fikarohana traikefa vaovao. Mathie Castelli sy ny ekipa ao amin'ny CM4 Productions dia namoaka ity lalao video ity izay fanamby mahafinaritra, na dia mety hikarakara haingana ny bateria aza izy io. Ny karazana izay manampy kalitao bebe kokoa amin'ity lohateny ity ary mandeha tsikelikely dia mila dingana tsara, ka hianarantsika ny momba ny fahasamihafana sy ny tsiambaratelon'ny Battleplans.
1 Lalao efa vita sy voafaritra tsara
2 RTS izay tiana sy lalaovina
Lalao efa vita sy voafaritra tsara
Ny lalao dia manomboka toy ny hoe niditra isika fampianarana tahaka ny DOTA izay ahafantarantsika ilay mahery fo sy ny miaramilany izay miady amin'ny toerana stratejika samy hafa mba handresy amin'ny farany. Amin'ireto lalao voalohany ireto dia miharihary fa lalao voafaritra tsara sy mandroso io. Mampiseho tsara amin'ny fomba hahafahantsika mifehy ny tafika sy ny fomba ilain'izy ireo fahaiza-manao kely hahafahana miatrika tetikady izay hitondra anao ny fandresena farany.
Tsy dia sarotra loatra ny milalao, zavatra ankasitrahana, saingy manana halalina ho an'ireo mpilalao te hiditra amin'ny lalao. Marina izany malahelo lalao amin'ny halaliny lalina izahay, fa toy ny RTS tsaratsara kokoa, fotoana kely vao hitranga izany.
Battleplans dia mametraka anao alohan'ny fandresena faritany amin'ny ady amin'ny fotoana tena izy ary ao no mila mahafantatra ny fomba fampiasana tetika. Atambaro ireo ekipa samihafa ary ampiasao ireo mahery fo miaraka amin'ireo fahaiza-manao manokana ireo, hamela ny mpilalao hiakatra amin'ny fandresena. Ary io dia azonao atao ny manatrika ady miaraka amin'ny singa 100 isaky ny lafiny.
RTS izay tiana sy lalaovina
Ao amin'ny Battleplans dia ho reraka manafika ianao, saingy tsy maintsy hanao izany koa ianao miaro faritany resy. Azonao atao ihany koa ny misafidy ny afaka milalao amin'ireo mpilalao hafa izay tsy maintsy simbanao ny drafi-piarovany, tahaka ny azon'izy ireo atao aminao.
Ny ligin'ny ady dia mametraka anao alohan'ny fandresen'ny faritany hitazonana azy ireo ary amin'izany esory loharano sarobidy. Tsy maintsy ho fantatrao ihany koa ny fomba hanokafana singa vaovao, hahatonga lafatra ny fahaizan'ny maherifonao ary ho jeneraly amin'ny ady amin'ireo ady ireo miaraka amin'ny mpiady marobe. Izy io dia amin'ny karazany izay ahitana fahaizany iray hafa.
Taorian'ny fandefasana faritra, Battleplans dia izao misy manerantany ao amin'ny Google Play Store. RTS isaina ary anananao maimaim-poana izany amin'ny micropayments mazava ho azy.
Ny vokany, ny famolavolana toetra, ny tontolo iainana ary ny zava-drehetra amin'ity lalao ity voalamina tsara izy io. Sarotra ny mahita teboka ratsy izay mandoto ny traikefa amin'ny lalao, saingy taorian'io fandefasana isam-paritra io ary nofongorana ireo bibikely dia ao anaty fanjakana mahatahotra izany. Ankehitriny dia mijanona fotsiny ny hanaovana azy io be sy ny studio afaka mamoaka fanavaozana miaraka amin'ny atiny bebe kokoa.
Ny endriny mahafinaritra be
Ny lafiny multiplayer
Fahaizana mitantana ekipa maromaro miaraka amin'izay
Battleplans - Fanafihana sy fiarovana
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Paikady ara-potoana miaraka amin'ny Battleplans, lalao vaovao miaraka amina fomba fijery mahafinaritra
Dingana, ny vaovao avy any Ketchapp hifehezana foibe mihodina